အမေရိကားမှာ အများစု ကားမောင်းလိုင်စင် အလွယ်တကူ ရကြပေမဲ့ ပေါ့တန်ဖြေရင် ပထမအကြိမ်မှာ စာမေးပွဲကျ သူချည်းပါပဲ။ ကျနော် DMV သွားဖြေ၊ အောင်လက်မှတ်ပုံလေးပါ။ ကားအကြောင်း ကိုKelvin လို ရယ်စရာတွေ အများကြီးပါ။ တက္ကဆက်မှာ ညသန်းကောင် Highway ပေါ်တက်တာ မီးမပြလို့ ရဲကား ဖမးခံရ၊ မြန်မာလိုင်စင် နဲ့ မြန်မာပတ်စပို့ ကို ညသန်းကောင်အချိန် အမေရိကန်ရဲ ဗဟိုအထိ မှန်ကန်ကြောင်း. ၂နာရီလောက် စစ်ဆေးခံရဖူးပါတယ်။ Alcohol Test, ရဲ လူငယ်လေးနဲ့ ၂ယောက်နဲ့ အလပ စကားပြောခဲ့ရတယ်။ ပတ်စပို့ ဗဟိုကစစ်တာ အဖြေ သိအောင် ၁နာရီ စောင့်ရတယ်။ ကားအကြောင်း ဆောင်ပါး တစ်ခု ဘလောက်ခေတ် ၂၀၀၉ မှာ ရေးခဲ့တာပါ။
Kelvin 6.months in 2019 ပို့စ်
ကို လာ လည်ကြမဲ့ သူတွေ ကော
သည် မှာ အခြေချ နေ ကြမဲ့ သူ တွေ အတွက်ပါ။
တတိယ အကြိမ် မြောက်
ကျွန်တော့ ရဲ့ အင်/ယာ ဆိုင် ရာ
သျုေတသန ခ ရီးစဉ် (၆ လ နီးပါး)
သည် တစ် ခေါက် တော့
မြန်မာပြည် ပြန်ရောက် ရင်
တစ်ထောင့် ငါး ည ပုံ ပြင် လေး (Thousand and5Nights)
တွေ ရေး ပြ ရ မလား ဘဲ။
အခု တစ်ခေါက် မှာ
ထဲထဲ ၀င်ဝင် သိ လာ ခဲ့ ရ တဲ့
DMV ( Department of Vehicle) မြန်မာလို ကညန ရုံး ပေါ့။
၁- မြန်မာနိုင်ငံ က ထုတ် ယူလာတဲ့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ်
( International Driving Permit )
Department of Road Transportation , Naypyitaw
တရားဝင် မောင်း လို့ လုံး ၀ မရ ပါဘူး။
(မိမိ ကိုယ်တိုင် DMV က အရာရှိ နဲ့ တွေ့ ဆုံ မေး ပီး ခဲ့ပါပီ)
Asia က ဖြစ် လို့ ပါ လို့ ပြော ပါတယ်။
ဆက် ပြော တာ တော့ နောင် မှ အသေးစိတ် ပြော ပြပါမယ်။
2- မိမိကိုယ်တိုင် ၂ ကြိမ်
သူများ ကား က ၀င်တိုက် တာ ကြုံ ခဲ့ ပီး ပါပီ။
Police က စ မေးတာ က DMV က America ကားမောင်း လိုင် စင်ပါဘဲ။
မရှိ ခဲ့ ရင် ချက် ခြင်း လက် ထိပ် ခတ် ပါ တယ် ပြော ပါတယ်။
3- အားလုံး ကို တိတိကျကျ ကိုင်တွယ် တော့
တရား ဥပဒေ အတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် အရေး ယူ တာပါဘဲ။
( မြန်မာ နိုင် ငံ လို လာဘ် ထိုး လို့ လုံးဝ ( လုံးဝ) မရ ပါဘူး။)
4- တကယ် လို့ သူတို့ နိုင်ငံ ရဲ့ တရား ၀င် DMV လိုင်စင်မရှိဘဲ
မြန်မာ က ထုတ် တဲ့ IDP- (International Driving Permit) ဆို
ကောင်းမွန် တဲ့ Insurance Company က လုံးဝ မလုပ် ပေးပါ။
အကြံ အဖန် တွေ က တော့ လုပ် ကြပါတယ်။
သည်လို ခိုး ပီး လုပ် ထား တဲ့ အဆင့်နိမ့် လက်မှတ် တွေ နဲ့ သာ
ကားတိုက်မှု ( မိမိ က ဘဲ တိုက် တိုက်/ တစ်ခြား လူ က ဘဲ တိုက်တိုက် )
ဖြစ် ခဲ့ရင် တော့
အမေရိကန် ရဲ့ တိကျ လှ တဲ့ ဥပဒေ က ထိထိရောက် ရောက် တွယ် ပီသာ မှတ် ကြ ပါရန်။
ခံရ ပီး ဘ၀ တောင် ပျက် ပီသာ မှတ် ပေတော့ လို့သာ။
🇺🇸 မှာ က တရား ဥပဒေ က သိပ်စိုး မိုး တော့
သူတို့ နိုင် ငံ သား တွေ လဲ
အစိုး ရ ကို လေးစား ကြ ရ ပီ ပေါ့။
မိမိရဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယာဉ် မတော် တဆ မှု မှာ
သူများ ကား က မိမိတို့ ကားကို ၀င်
တိုက် ခံ ရတာ ( ၂ ခါ စလုံးပါဘဲ)
မောင်း သူ က
မှန်ကန် တဲ့ DL / Insurance လက်မှတ် တွေရှိနတော့
(မိမိ က လဲ တရား ၀င် နေထိုင် ခွင့် ဗီဇာ က သက်တမ်း ရှိနေတော့)
မိမိ လို နိုင်ငံခြားသား အတွက် တောင် မှ
ကား တိုက် လိုက် လို့ ဖြစ် သွား တဲ့
ခါး အဆစ် ရိုး လွှဲ သွား တာ ကို တောင်
ဆေး ကုသမှု US $ 5000 ( မြန်မာငွေ- ကျပ် ၇၅ သိန်း ဖိုး ကု သ နေ ရ ပါတယ်) ဖိုး အထိ ( နာမည် ကြီး အဖြူ Dr. ကြီး နဲ့)
အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ ဖြစ် လို့ သာ ပေါ့။
မိမိတို့ မြန်မာ တွေ အမေရိကန်🇺🇸
အတင့် မရဲကြ/ လက်တည့် မစမ်း ကြ ပါ နဲ့လို့သာ။
ယာဉ်တိုက်မှု အမေရိကန် 🇺🇸
၏ မှာ ဖြစ် ရင်
Highway Police ကနေ
ဘာတွေ အသေးစိတ် Report အတွက် မေးတာ တွေ ကို post တင် ပေး ပါ မယ်။
Posted by Witmone at 3:10 PM0comments
Posted by Witmone at 3:08 PM0comments
မြန်မာ Burmese, အမေရိကား-စင်ကာပူခရီးသွားခြင်းအကြောင်း
ခရီးသွားဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် .. ငွေအကုန်ကျများ၍ စာအုပ်အဖြစ် မရောက်သေးပါ။
USA တနှစ်တာ ဘလောက်မှာရေးခဲ့တာတွေထဲက အချို့ကို Attach လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာမျက်နှာ ၅၁ - ၅၉ Page 51-59 မှာ ကားမောင်းတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းရေးထားပါတယ်။
ရေးတဲ့စတိုင်က ဆရာလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံရှိပေမဲ့ စာရေးသူတို့ထုံးစံအတိုင်း စေတများနဲ့ရေးလိုက်တာကြောင့် အမှားတွေပါမှာပါ။ ပါတဲ့ အမှားတွေကိုလည်း ကျွန်တော့်ကို မသိသောသူများ၊ ကျွန်တော့်ကို နားလည်မယ် မျှော်လင့်ပါကြောင်း..
ဇွန်လ - ၂၀၁၁
For those interested Burmese Society
Posted by witmone.singapore , Reader : 7202 , 20:02:01
Detained Noble Peace Price winner Daw Aung San Suu Kyi has writtenavery famous book named, "FREEDOM FROM FEAR". But most of the Burmese are still in fear of Junta who use very heavy jailed sentences and tortures on those political prisoners. One must be very careful to formacharity andasociety in Burma as Junta dislikes any society without their management. All societies in Burma are closely monitored by Junta. In Singapore, just two official societies linked to Burma are registered under Singapore registry of society, "Myanmar Club" and "Myanmar Business Association". The rest are Buddhist and Christian religious societies such as, "Burmese Buddhist Temple – Toa Payoh", "Shwedagon Society", "SMC Meditation Center - Havelock Rd", "Mahamuni Buddhist Society - Clementi", "VIPASSANA MEDITATION CENTRE - Paya Lebar", "Judson Baptist Church - Novena", "Karen Baptist Church", etc… Their addresses can be found at website.
14-oct-2007 Concern for Burma /Myanmar
Posted by Witmone at 4:51 PM0comments
Labels: စွန့်စားထွက်ခွာ, အမေရိကား
အမေရိကားကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကလူတွေ ပြောင်းရွေ့အခြေချကြတဲ့အထဲမှာ မြန်မာတွေလည်း မနည်းလှ။ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေကြောင့် ရောက်လာခဲ့သူက အများစုပေါ့။
အမေရိကားဆိုတာ အိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးကြပဲ ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ အခက်အခဲပေါင်းစုံက ရေးလို့တောင်ကုန်ဖွယ်မမြင်။ အခက်အခဲပေါင်းစုံထဲမှာ ပထမဆုံးအခက်အခဲကတော့ နေရေးပြသနာပဲ။ စား၊ဝတ်၊နေရေး လို့အသုံးရှိပေမဲ့ အမေရိကားမှာ စားနဲ့ဝတ်က ပြသနာမရှိ။ အစားအသောက်၊ အဝတ်အစားပေါတဲ့နိုင်ငံပေမဲ့ နေရေးကတော့ ခက်ကြတယ်။
မြန်မာတွေကြိုက်ကြတဲ့ ဆန်ဖရန်(San Francisco)၊ နယူးယော့ခ်(New York )၊ ဘော့စတွန်(Boston)၊ ဆန်ဟိုဆေး(San Jose) နဲ့ လော့စ်အိမ်ဂျလစ္စ(Los Angeles)တို့မှာဆို နေရေးအတွက် ပိုခက်ပါတယ်။ ဒီမြို့တွေက အိမ်ခန်းငှားခဈေးကြီးတဲ့ အမေရိကားမြို့ကြီးတွေစာရင်းမှာ တစ်ကနေငါးအထိ အစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
အမေရိကားရဲ့ မြို့ကြီး (၂၅)မြို့က အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတဲ့ အိမ်ခန်းတစ်ခုရဲ့ ပျမ်းမျှတစ်လစာအငှားပေါက်ဈေးကို အခြေခံပြီးတွက်ထားတဲ့ Business Insider Inc အဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းတွေအရ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ထဲက နာမည်ကျော် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့က ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး တန်နက်ဆီပြည်နယ်၊ မန်းဖစ်မြို့(Memphis ,Tennessee)က ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်တယ်။
သူတို့အဖွဲ့က အိမ်ငှားခငွေကို စုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့ ၂၈%ထက် မကျော်လွန်စေပဲ သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မဲ့ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေကိုပါ တွက်ပေးထားတယ်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ အိမ်ခန်းတစ်ခုအတွက် အိမ်ငှားခနှုန်းထားတွေမှာ နယူးယော့ခ်(New York)က ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရဲ့ ဒန်ဗာမြို့( Denver, Colorado) ထက် နှစ်ဆဈေးများတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် အမေရိကားမှာ နေထိုင်ကြသူတွေရဲ့ ဝင်ငွေအစိတ်အပိုင်း အများစုဟာ နေရေးအတွက် သုံးလိုက်ကြရတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။
(၁) အမေရိကား အနောက်ဖက်ကမ်းရဲ့ နာမည်ကျော် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့က အိမ်ခန်းငှားခ ဈေးအလွန်ကြီးတဲ့ နယူးယော့ခ်ကို ကျော်ပြီး နံပါတ်တစ်စွဲသွားပါတယ်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ အိမ်ခန်းတစ်လုံးရဲ့ ပျမ်းမျှအငှားဈေးနှုန်းက တစ်လကိုဒေါ်လာ(၄၃၈၂)ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်စာဝင်ငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ(၁၈၇,၂၀၀) ရှိမှ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ တစ်သိန်းရှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင် ဆိုတာ အတော်များတဲ့ ဝင်ငွေပါ။ မောင်လူပေဆိုရင် နှစ်ကိုယ်ခွဲလုပ်မှ ရမဲ့ဝင်ငွေမျိုးပေါ့။
(၂) မြန်မာတွေကြိုက်တဲ့ နယူးယော့ခ်မြို့ကြီးကတော့ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ အိမ်ခန်းတစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှငှားခက တစ်လကိုဒေါ်လာ(၃၇၈၉)နဲ့ ဒုတိယလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ(၁၆၂,၃၈၆)ရှိရင် အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ပါ့မယ်။
(၃)အမေရိကား အရှေ့ဖက်ကမ်းမှာ နယူးယော့ခ်ပြီးရင် မြန်မာတွေကြိုက်ကြတာက ဘော့စတွန်ပါ။ မန်စတာချူးဆက်ပြည်နည်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ အိမ်ခန်းငှားခ ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ(၃,၃၅၆)ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ(၁၄၃,၈၂၉)လိုပါ့မယ်။
(၄)ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နည်းပညာဈေးကွက်ကို ကြီးစိုးထားတဲ့ ဆီလီကွန်တောင်ကြားတည်ရှိရာ ဆန်ဟိုဆေးမြို့တဝိုက်က ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့နဲ့ မိုင်ငါးဆယ်လောက်ပဲဝေးတယ်။ တစ်နာရီလောက် ကားမောင်းရင်ရောက်ပြီပေါ့။ ဆန်ဟိုဆေးမြို့ရဲ့ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါအိမ်ခန်းငှားခက တစ်လကိုပျမ်းမျှ(၂,၈၇၈)ဒေါ်လာ ကျသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၁၂၃,၃၄၃)ရှိရင် ရပါပြီ။
(၅)ဟောလိဝုဒ်ဆိုလူတိုင်းသိ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ လော့စ် အိန်ဂျလစ္စမြို့တစ်ဝိုက်ပေါ့။ ဒီမြို့ကြီးက မြန်မာပြည်ရာသီဥတုနဲ့တူလို့ မြန်မာတွေကြိုက်ကြတယ်။ အိမ်ခန်းငှားခ တစ်လပျမ်းမျှ(၂,၇၇၃)လောက်ပေးနိုင်ရင် ရပြီ။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ(၁၁၈,၈၄၃)လောက် လိုအပ်ပါ့မယ်။
ဒါကတော့ အမေရိကားမှာ လူအများကြိုက်လို့ နေစားရိတ်ကြီးတဲ့ မြို့ငါးမြို့စာရင်းပါ။ မြို့ပေါင်း (၂၅)မြို့ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေတယ်။ နေစားရိတ်သက်သာတဲ့ မြို့တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ နံပါတ်အောက်ဆုံးကမြို့တွေပေါ့။
(၂၁) အာရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ ဖီးနစ်မြို့(Phoenix, Arizona) ကတော့ အိမ်ငှားခ(၁၀,၄၀)။ လိုအပ်မဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၄၄,၅၇၁)ပါ။
(၂၂)အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ ကိုလံဘတ်မြို့(Columbus,Ohio)မှာဆိုရင် အိမ်ငှားခ(၉၁၇)ပဲကြသင့်လို့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၃၉,၃၀၀)ဆိုရပြီ။
(၂၃)အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ အင်ဒီယားနားပူးလိစ်မြို့(Indianapolis,Indiana)မှာ အိမ်ငှားခ(၈၅၁)ပဲ။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၃၆,၅၁၄)ပဲလိုမယ်။
(၂၄)တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အယ်လ်ပါဆိုမြို့(El Paso,Texas )မှာ အိမ်ငှားခ(၇၇၃)ပဲမို့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၃၃,၁၂၉)ဆိုရပါပြီ။
(၂၅)မြို့ကြီးတွေစာရင်းမှာ အသက်သာဆုံးအိမ်ငှားနိုင်မဲ့မြို့ကတော့ တန်နက်ဆီပြည်နယ်၊ မန်းဖစ်မြို့( Memphis,Tennessee)ပါ။ အခန်းနှစ်ခန်းပါ အိမ်ခန်းငှားခ(၇၆၉)ပဲကြသင့်မယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ(၃၂,၉၅၇)ပဲ လိုအပ်ပါ့မယ်။
ဒီတော့ တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလောက်နဲ့ နေလို့ရမဲ့မြို့တွေရွေးလို့ရလောက်ပြီပေါ့။ အမေရိကားမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချကြမဲ့ မောင်လူပေရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် သတင်းဖလှယ်တဲ့သဘောပါ။(For your information)
ငွေထုတ်ကိုင်ပြီးဝင်လာ၊ ရောက်တာနဲ့အိမ်ဝယ်လိုသူတွေအတွက်လည်း သတင်းကောင်းပါးချင်သေးတယ်။ မိုးပေါ်တက်နေတဲ့အိမ်ဈေးတွေ ငြိမ်သွားပါပြီ။ မကြာမီ အနည်းငယ်ပြန်ကျဖို့ ရှိပါကြောင်း။ အဲဒီအချိန်စောင့်ပြီး စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်လို့စ်။
(အိမ်ပွဲစား မဟုတ်ဘူးနော်။ အိမ်မရှာခိုင်းကြနဲ့ဦး။ 😄)
Posted by Witmone at 4:36 PM0comments
ရေရှည်စီမံကိန်း စင်ကာပူ CPF နဲ့ အမေရိကန် 401(k)
လူတွေဟာ ရေတိုစီမံကိန်းတွေပဲ အဓိကထားကြပါတယ်။ မြန်မာအများစုကလဲ ရေတိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ရေရှည်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာတွေကို ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ စနစ်တကျလုပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရည်ချင်းရှိသူများစွာ လုပ်ခွင့်မရ၊ လုပ်ခွင့်ရရင်လဲ လုပ်လိုကမရ ဖြစ်နေပါတယ်။ အမေရိကား၊ သြစတြေလျား၊ ဥရောပနိုင်ငံများကို အားကျပြီး သူတို့လို လိုက်လုပ်၊ လိုက်သုံးစွဲရင်တော့ လူမွဲဘ၀ရောက်သွားဖို့ လမ်းများပါတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရရဲ့ ရေရှည်စီမံကိန်းကြီးကတော့ ချွေတာစုဆောင်းခြင်းပါ။ CPF စနစ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ SSA လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုရှယ်စကြူရတီ ဖြစ်ပြီး၊ အခုတော့ အစိုးရကလည်း စင်ကာပူစတိုင် 401(k) စနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ အားပေးနေပါပြီ။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်အတွက် အဓိကအတုယူစရာ နိုင်ငံကတော့ စင်ကာပူ စင်ကာပူ စင်ကာပူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူအတိုင်း လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ရန်ကုန်ကိုစင်ကာပူလို ဖြစ်အောင် ပဲ ကြွေးကြော်ဝံ့ကြပါတယ်။
စင်ကာပူရဲ့ အစိုးရ ချွေတာစုဆောင်းခြင်း၊ စုဆောင်းလို့ရတဲ့ငွေကို လူသားအရင်းမြစ် (ပညာရေး ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြစ်အောင်) Upgrading Program များကို အားပေးခြင်း စတဲ့လုပ်ရပ်များက အလွန်အတုယူစရာ ကောင်းပါတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံက ချွေတာစုဆောင်းစနစ် (Tax System)
နံပါတ်(၁)ကတော့ လာပ်မစားဘူး လို့ လုံးဝကြေငြာပြီး တက်လာတဲ့ လီကွမ်းယူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စင်ကာပူအစိုးရက ဘယ်နိုင်ငံကမှ ငွေချေးဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ သူများဆီက မချေးငှားသလို သူများကိုလဲ ငွေချေးပေးတာ၊ ကူညီတာ မရှိပါဘူး။
တကယ်တော့ CPF စနစ် ဆိုတာ သာမန်လူတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။
သာမန်လုပ်သားပြည်သူတွေကတော့ လစာ ၁၀၀ ရရင် ၃၀% ဖြတ်ယူထားလိုက်ရင် လုံးဝမကြေနပ်ပါ။ လူ့သဘောသဘာဝက ရေတိုပဲ ကြည့်ပါတယ်။ ရေရှည် လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားပါ။
အစိုးရခေါင်းဆောင်များကတော့ ရေရှည်ပဲ ကြည့်ရပါတယ်။ ချွေတာစုဆောင်းခြင်းပါပဲ။
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ စီးပွားအကြပ်တည်း
လောလောဆယ်တော့ တိုင်ဝမ်အစိုးရမှာ ၀န်ထမ်းတွေ ပင်စင်ငွေ များစွာကုန်ကျနေလို့ ပင်စင်လစာငွေတွေ လျှော့ချဖို့ လုပ်ရင်း အငြင်းပွားနေကြပါပြီ။ ဥရောပနိုင်ငံများ အားလုံးနီးပါး၊ အမေရိကား တွေမှာ စီးပွားမကောင်းလို့ ငွေကြေးအကြပ်တည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်သူလူထုက မချွေတာပဲ ... ကြွးတင်၊ အရှင် (အစိုးရ)ဆပ်လိမ့်မယ် ဆိုပြီး ငွေချေးပြီးစီးပွားရေးတွေလုပ်ကြ။ သုံးဖြုန်း၊ ဇိမ်ခံမှုများကြောင့် အစိုးရတွေမှာ စုဆောင်းငွေ နည်းပါးလာပါတယ်။ အာရှတိုက်မှာ အစိုးရစုဆောင်းငွေ ရှိတဲ့နိုင်ငံများကတော့ ဂျပန်၊ တရုပ်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ စင်ကာပူ တို့ဖြစ်ပြီး ဥရောပတိုက်မှာတော့ ဂျာမဏီနဲ့ပြင်သစ်၊ နော့ ဒစ်နိုင်ငံများ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်မိသားစု၊ ကိုယ်လုပ်ငန်း ပါဝင်သူများအတွက် ရေရှည်ကြည့်သူများက ငွေကို ဘယ်တော့မှ လွယ်လွယ်မပေး၊ မသုံးခိုင်းပါဘူး။ သားသမီးများရဲ့ လစာငွေများကို မိဘများက ရအောင်ချိုသာစွာ တောင်းရမ်းတတ်ပါတယ်။ သူဌေး ဖြစ်ပေမဲ့ သားသမီးဆီက ချိုသာစွာ တောင်းတော့ မိဘကို ပေးကမ်းတဲ့ သားသမီးတွေ ရေရှည်မှာ ကြီးပွားတိုးတက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလဲ အဲဒီ စုဆောင်းခြင်း အလေ့ကျင့်အတွက် ဘဏ်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီ ဆိုပေမဲ့ ရေရှည် ၅နှစ် စီမံကိန်း ဆိုပြီး သံဓိဌာန်နဲ့ စုဆောင်းဖို့ဆိုတာ လုံးဝ(လုံးဝ) မလွယ်ပါဘူး။ စိမ်ခေါ်ချက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး စုဆောင်းနည်းကတော့ ပညာရေး အလုပ်လုပ်ရင်း အချိန်ပိုင်းကျောင်းတက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်များ ပညာတတ်၊ ဘွဲ့ရ၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ချိန်မှာလဲ မိဘကို စနစ်တကျ ပေးကမ်းခြင်းက အဓိကချွေတာစုဆောင်းတဲ့ အကျင့်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘကို စနစ်တကျ ပေးကမ်းတတ်တဲ့လူ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲပါဘူး။
လောလောဆယ်တော့ မြန်မာအစိုးရ၀န်ထမ်းများကို ၅% လူမှုဖူလှုံရေး နဲ့ စုဆောင်းခြင်း စတင်နေပါတယ်။
CPF and 401(k)
This fund is to make citizen to save money for Housing, Medication and Retirement.
Great work by Singapore leader, Lee Kuan Yew who make Singapore from mud to world role model. This is copied from Israel since 1965.
Singapore CPF and America 401(k) is same. same. Government money not to abuse by loop holes. America social security fund is abused by many medical companies and education institutes + warfare associations.
Recently, Taiwan government problem to cut or stop pension by elders.
Rich people - Not to be so rich (tax them)
Middle class - let it be above 70% of population.
Poor people - Make sure, no poverty
That is principle of bad government.
Education is the best way. But saving attitude such as Social Security / CPF system are implemented by good government.
Singapore is now world class country but many rich people still want to abuse the CPF fund. In USA, already abused Social Security fund but America is still survive it government still have good system and good leaders.. EU Europe countries already at the worst situation.
CPF and 401(k) of to make citizen to save money by for retirement.
1. Singapore CPF system
2. CPF info
Official site: https://www.cpf.gov.sg
4. Social Security (USA)
Official site: https://www.ssa.gov/
Posted by Witmone at 10:07 PM0comments
နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူခရီးစဉ် ဒီဇင်ဘာ-၂၀၁၆
မိတ်ဆွေအချို့ ရဲ့ စင်ကာပူခရီးစဉ် DASSK images.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူမှာ မြန်မာ ၇၀၀၀ နဲ့ တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ ယနေ့ဟာ ဗီဇာ မလိုပဲ မြန်မာများ စင်ကာပူကို ရက်၃၀ လာရောက်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးနေ့ မင်္ဂလာနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ ရောက်လာချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိ (ခြစားမှု) တိုက်ဖြတ်ရေး စင်ကာပူ CPIB နဲ့ အထူးတွေ့ဆုံပါတယ်။
မြန်မာကို ရင်းနှီမြှပ်နှံသူတွေ အများစုဟာ စင်ကာပူက တဆင့် လာကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာတတ် မြန်မာလူငယ်အများစု စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေသလို မြန်မာစီးပွား မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်အများစုက စင်ကာပူအခြေပြု အနောက်နိုင်ငံများကို သွင်း/ထုတ်ကုန် လုပ်နေကြပါတယ်။ ဂျပန်ကား/စက်ပစ္စည်း တင်သွင်းသူများ စင်ကာပူကတဆင့် တင်သွင်းသလို ပဲ ဆန် လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပို့ရင်လဲ စင်ကာပူကတဆင့် တင်ပို့နေတာ အားလုံးအသိပါ။ မြန်မာပြည်ကို ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု ဒေါ်လာ၁၅ဘီလျံ နဲ့ တရုပ် ပြီးရင် ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဟိုတယ်ကြီးတွေ ရုံးအဆောက်ဦတွေမှာ အများဆုံးရင်းနှီးထားပါတယ်။ အနာဂါတ် စက်မှုနည်းပညာ မြှတ်နှံမှုတွေလည် အစပိုင်းမှာ စင်ကာပူအခြေစိုက် အနောက်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများက တဆင့် လာကြမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံး အချက်က Human Resource ဆိုတဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရာမှာ စင်ကာပူမှာ ပညာဆည်းပူးခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်များ အရှိန်ဟုန်ကြီးစွာ ပါဝင်လာနေပါပြီ။ လူကြီးတွေကတော့ မြန်မာပြည်ပြန်လာ အခြေမချနိုင်ပေမဲ့ စကာပူမှာ ပညာဆည်းပူး အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ မြန်မာလူငယ် အမြောက်အများ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာပညာတတ်လူငယ်များစွာ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ် ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဒီအုပ်စုကြီးကို မြန်မာအစိုရသစ်က အသုံးချဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရက ကြိုးစား နည်းလမ်း ရှာနေမှာပါ။
ဒီတခေါက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရောက်လာတော့ ၂၀၁၃ တုန်းကထက် အများကြီး ထူးခြားပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း စင်ကာပူခရီးစဉ်ကတော့ အကြိုခရီးဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူရောက်မဆိုက် ပြောသွားတဲ့အတိုင်း ''နောင်နှစ်၂၀ ဆို မြန်မာ့စီးပွားရေးက စင်ကာပူကို ကျော်သွာမယ်'' ဆိုတာ အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အဂတိ တဟုန်ထိုးနဲပါးသွာဖို့ နဲ့ မြန်မာ့စီးပွား တဟုန်ထိုး တိုးတက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ စင်ကာပူကနေ အဖိုးတန် Human Resource များစွာ ရှိမယ်။ စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ ညီညွတ်စွာနဲ့ မြန်မာထွက်ကုန်များကို စင်ကာပူကတဆင့် မြှင့်တင်ဖို့ မြန်မာသံရုံးကိုလည်း ကော်မရှင်နာအဆင့် မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
စင်ကာပူမှမြန်မာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးစဉ်။
စင်ကာပူအကြီးကဲ လီရှန်လုန်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတပ်ဖြင့် ကြိုဆိုစဉ်။
စင်ကာပူအကြီးကဲ ဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လုန်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှတ်တရလက်ဆောင်။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့် လီရှန်လုန်းဖခင် လီရှန်လုန်း ဓါတ်ပုံလက်ဆောင်)။
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဗီဇာမပါပဲ ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိ နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
စင်ကာပူ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး က မြန်မာနိုင်ငံသားများကို စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဗီဇာမပါပဲ ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိ နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ယနေ့ (၂၄/၁၁/၂၀၁၆) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။
ယင်းကြေညာချက်မှာ စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်း (Lee Hsien Loong) မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇွန်လ ၇ မှ ၁၀ ရက်အထိ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သက်သေထား၍ စင်ကာပူ နှင့် မြန်မာတို့ သံတမန်နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ထိုးလဲလှယ်ချက်အရ ယခုဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အားခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကြေညာချက်ထဲတွင်ပါရှိသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိ်ုင်ငံသား နှစ်သိန်းကျော် ဟာ စင်ကာပူ၌ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Posted by Witmone at 4:35 PM0comments
အမေရိကန်-မြန်မာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အိုဘားမား ဝါရှင်တန်တွင်တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်ခဲ့သော ခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် (၇၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် နယူးယောက်မြို့သို့ (၁၆-၉-၂ဝ၁၆) ရက် နေ့မှ (၂၄-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယနေ့ (၂၅-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့ ည (ဝ၉း၅ဝ) နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ နယူးယောက်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း (၁၇-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့၌ နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယင်းနေ့တွင်ပင် ဘော့စတွန်မြို့ရှိ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် မှ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားချီးမြှင့်သည့် 2016 Humanitarian of the Year Award ကို လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် (၁၈-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့ တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးမှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများနှင့်လည်းကောင်း၊ (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၉-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (UNESCO) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms. Irina Bokova ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Lars Lokke Rasmussen ၊ မက္ကဆီကိုသမ္မတ H.E. Mr. Enrique Pena Nieto ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် H.E. Ms. Sheikh Hasina တို့နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။(၂ဝ-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် “Together for the 2030 Agenda: Partnering for Women, Children and Adolescents, to Thrive and Transform the World ” အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေး၌ တက်ရောက်၍ Panelist အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Lyad Ameen Madani အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
၄။ (၂၁-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ၌ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့တွင်ပင် နျူကလီးယားလက်နက်စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty- CTBT) သို့ အတည်ပြုပါဝင်သည့် စာချွန်လွှာပေးအပ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး Asia Society က စီစဉ်ကျင်းပသည့် လူထုဟောပြောပွဲအခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၅။ (၂၂-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုံး၌ CNN သတင်းဌာနမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကိုလက်ခံဖြေကြားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ဥက္ကဋ္ဌ Prof. Klaus Schwab? Open Society Foundation တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. George Soros ၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး H.E. Mr. ZeidRa’ad Al Hussein တို့အားသီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့ညနေပိုင်းတွင် New York Public Library ၌ Academy of Achievement အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် Academy’s Golden Plate Award ကိုတက်ရောက်လက်ခံခဲ့ပါသည်။
၆။ နယူးယောက်မြို့သို့ မသွားရောက်မီ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့သို့ (၁ဝ-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၃- ၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ကာ လန်ဒန်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး၌ ဥရောပဒေသ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကဒေသတို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ၁၂ ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြီးအကဲများနှင့် လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဝါရှင်တန်မြို့သို့ (၁၃-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၆-၉-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့အထိ တရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ကာ အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘာရက်ခ်အိုဘားမားအပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်
US pledges to remove sanctions on Myanmar despite concerns over military, human rights
Thursday, 15 Sep 2016 | 12:40 AM ET CNBC.com
The U.S. has declared its commitment to removing all sanctions on Myanmar, marking yet another milestone for the former pariah state as it gets further integrated into the global economy. But some are questioning the move's timing amid worries about the military's dominance and human rights violations.
Lifting sanctions "is the right thing to do in order to assure that the people of Burma see rewards fromanew way of doing business andanew government," President Barack Obama announced on Wednesday.
မြန်မာနိုင်ငံ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်သတ်အနိုင်ရရှိပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက အာဏာလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းဝင် ငြိမ်းချမ်းစွာ နိုင်ငံတော်အာဏာ လွှဲခြင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရသစ်အဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်က ၂၅% လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့သစ်မှာလည်း ဝန်ကြီး၃ဦး (ကာကွယ်ရေး၊ နယ်စပ်၊ ပြည်တဲရေ) တွေကိုရယူထားပါတယ်။
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလမှာ သမိုင်းဝင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန် ခရီးစဉ်မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှာ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ အပါအဝင် စီးပွားရေးခရိုနီများစွာကို သမ္မတအိုဘားမား အစိုးရက အမေရိကန်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းများက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ လူများနဲ့သူတို့မိသားစုများ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အမေရိကန် စင်ကာပူ နဲ့ ဂျပန်၊ ဥရောပနိုင်ငံများ နဲ့အတူ တုရုပ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံများနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမယ် ဆိုတာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆
Posted by Witmone at 4:18 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၃ ရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့သည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား Nov-2014
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်သည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကို ကြိုဆိုသည့် အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ Excel Tower ရှေ့တွင် ဂရက်ဖတီဆွဲထားသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက် နံနက်က တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ- ဟိန်းထက်၊ မဇ္ဈိမ) သမ္မတ အိုဘားမားက ရန်ကုန်မြို့သို့ ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်) ညပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကာ သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ် ရွှေဂုံတိုင် ကုန်းကျော်တံတားအဆင်း Excel Tower ရှေ့တွင် အိုဘားမားအား ဂရက်ဖတီရေးဆွဲ ကြိုဆိုထားသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မိုးကာစဖြင့် ဖုံးကာလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Posted by Witmone at 1:37 AM0comments
တရုတ်ပြည်နှင့် မြန်မာ၊ အမေရိကန် - Reform to our Country (စီးပွားရေး)
ယခုမြန်မာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေသည်ကို သံသယဖြစ်နေသူများ၊ နောက်ကြောင်းပြန်သွားမည်စိုးရိမ်နေသူများ၊ ဦးသိန်းစိန်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုတော့ ယုံကြည်လာကြပြီဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးသည် စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားသူ လူငယ်၊လူကြီးများကို ရည်ရွယ်ပါသဖြင့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ပေါ့ရွှတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာပြည်တွင်းတွင် တွင်ကျယ်နေသော ခရိုနီ၊မိုနိုပိုလီနှင့်စစ်အာဏာရှင်တဖြစ်လဲ၊ လက်ရှိစီးပွားလုပ်နေသောစစ်ခေါင်းဆောင်များအား ယှဉ်ပြိုင်ရန်နည်းလမ်းမှာ ပညာရေးနှစ်စီးပွားရေးသာဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းတွင် ဝင်ရောက်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော်လည်း စိတ်ပျက်စရာမလိုပါ။ ကမ္ဘာတွင်ကြီးကျယ်နေသော ဂျာမဏီ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နှင့်တရုတ်၊ကိုးရီးယားတို့လည်း ပြည်ပရောက်သူတို့နိုင်ငံ သားများ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သည်။
Posted by Witmone at 11:48 PM0comments
အမေရိကားမှာ အများစု ကားမောင်းလိုင်စင် အလွယ်တကူ ရကြ...
အမေရိကန်နိုင်ငံ 🇺🇸 ကို လာ လည်ကြမဲ့ သူတွေ ကော သည...